Ny fisaintsainany mivoaka amin'ny watchOS 8 Fitness + | Avy amin'ny mac aho
Ny fisaintsainana dia zava-dehibe amin'ny olona maro ary mampihatra azy ireo amin'ny antony maro samihafa izy ireo, izao Apple nefa tsy te hanao azy io ho ofisialy ny horonan-tsary izay mampiseho safidy vaovao ho an'ny mpampiasa an'i Apple Fitness +, fisaintsainana feo. Ity horonantsary adiny iray mahery mahery ity dia an'ny session izay tanterahina ao amin'ny WWDC amin'ity taona ity ary mifantoka amin'ireo mpamorona dia mitondra ny lohateny hoe, State of the Union.
Ity fiasa ity dia tafaporitsaka tsy nahy ary tsy misy amin'ny serivisy amin'izao fotoana izao fa antenaina ho tonga miaraka amin'ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasan'ny Apple Watch, watchOS 8. Haino aman-jery maro no nanakoako ny vaovao ary toa farany hiasa amin'ny rafitra fandidiana ihany io asa io.
Ny lafy tsaran'ireo fiasa ireo izay tsy azon'ny mpampiasa mampiasa Fitness + ampiasaina, farafaharatsiny toa izany. Mazava ho azy amin'ny lafiny miaina, fisaintsainana ary fahatsiarovan-tena Miezaka mafy i Apple ary toa manampy betsaka amin'ny mpampiasa ireo endri-javatra ireo, noho izany dia tsara foana ny manatsara azy ireo.
Ny fiasa na ny fampiharana miaina an-tsokosoko izay ananantsika nandritra ny fotoana ela tao amin'ny Apple Watch dia tena ilaina ary raha manatsara izany amin'ny safidy maro hafa koa izy ireo, tonga lafatra. Vitsy na vitsy no vitsy an'isa vaovao izay nampiana ao amin'ny rafitra fiasa vaovao an'ny Apple Watch Ka ireo vaovao rehetra ireo, na dia faharoa aza, dia azo antoka fa tsara ho an'ny mpampiasa. Mahaliana raha toa ka handefa Fitness + amin'ny firenena maro i Apple, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Mivoitra ao amin'ny watchOS 8 Fitness + ny fiasa misaintsaina